CIRO WAXA UU XIL QARAN U MAGACAABAY XUBNO U OLOLEEYEY JABHADA CAARE. XEERKEE INOOGA YAALA XIL KA XAYUUBINTA GUDOOMIYE XISBI OO QARANKA KA HORYIMID. QALINKII ENG MOHAMMED HAIBE HERSI
Saturday November 30, 2019 - 20:57:29 in Maqaallo
Maskaxdii wacnayd iyo dadkii meel u wada jeeday,nimankii malmalay waa kuwii maalay kaligoode. Haday maalintii na horkacaan midho ma wayneyne. Ma naxaanadiibaa arliga meerisna u toline. Marnaba yaydinaan dhicin kuwii male ku soo goostay. Miyigeena nimankii
mindida meelwalba u dhiibay. Kuwii muusanaw iyo talaay nagula meeraystay. Nimankii mashaqada ay dhigeen reerba dhan u moosay. Suntay nagu mudeen wiilashii la is martiyi waayay. Muraadkoodu nimankuu ahaa moodharka iyo daarta. Mudaahanada beenta ah kuwii
nagu maqaar saaray Abwaankii Timacade AUN, waxa uu gabaygiisan taariikhda ah ku fasiray nimankii umada
horkacayay, waqtigii midawga labada gobol ee waqooyi iyo koonfur, kuwaas oo lagu tuhunsanaa aqoon iyo in ay umada cadkeeda u soo dhiciyaan, laakiin se hankoodu uu ahaa kaligaa noolaw, umada iyo wadankana waxba igama galin.
Taariikhdu way soo noqnoqotaa, maanta waxa aynu arkaynaa kuwa isku magacaabay siyaasiyiinta, walaw aanu badankooda jirin nin kuliyad siyaasadeed oo caana ka soo baxay,
hadana ay u dheertahay daacadnimo daro, ayna umada ay matilayaan iyo dalkaba dan ka lahayn. Waxaynu arkaynaa in nimanka ku jira xisbiyada, sida xisbiga wadani oo kale ay difaacayaan, qiilna ugu samaynayaan cunaqabataynta dawlada taagta daran ee xamar la
maagan tahay Somaliland, taas oo aduunyadu waxba ka dhagaysan wayday. Tusaale waxa inoogu filan ina buubaa oo markii dawlada xamar ee taagta daran ay sacuudiga ka dalbatay in aan xoolo ruqsad ka haysan xamar laga dhoofin karin dekeda Berbera, ku taageeray arinkaas
dawlada xamar, isla markaana qiil u sameeyay.
Gudoomiye ciro oo aynu uga baranay in aanu waligii ka soo qayb gelin xuska maalinta qaranimada Somaliland, kuna jeesjeeso maalintaasi qiimaha leh, isagoo yidhi hadii aan ka qayb
galo xuska xalaaloobimayso, hadii aan ka maqnaadana xaaraan noqonmayso. Ma arag wali ciro oo soo jeedinaaya ama ka hadlaaya, barnaamij uu wadankani horumar ku gaadhayo. Ciro tan iyo intii uu ahaa gudoomiyaha baarlamanka shaqadiisu waxay ahayd khilaaf iyo in uu kursiga ku
fuulo awood qabiil, taas oo u suuro galiwayday. Doorashadii markii laga helayna, xaguu wadanka iyo dadka baahan ee bilaashaqada ah ugu tudhi lahaa, waxa uu kor ugu qayliyay qabiil iyo talaay, isagoo ka dambeeyay shirkii bilaa sababta ahaa ee lagu qabtay buurta gacan libaax,
looguna magacdaray, raadinta saamigii uu garxajis kulahaa Somaliland oo ka maqan. Runta marka aad u fiirsatana, qabiilka kaliya ee laba xisbi hogaamiya, waa ucid iyo wadaniye uu yahay
Hadaba gudoomiye Ciro waxa uu wiigan u magacaabay xilal qaran laba xubnood oo kala ah faysal oo isku magacaabay boqor, waxa loo magacaabay wakiilka sanaag ee xisbiga wadani. Faysal waxa laga hayaa in uu yidhi, jabhada caare waa rasamaalkii garxajis, taageero wayna wuu
u muujiyay kuwaa cadawga la soo saftay. Ninka labaad waxa la yidhaa cismaan cumar dool, waa
nin ka soo horjeeda qaranimada Somaliland, farmaajona taageersan. Hadaba gabagabadii ciro oo doonaya in uu madaxwayne ka noqdo Somaliland waa ninka ka dambeeyey asaaska jabhada, halka uu gudoomiye ku xigeenkiisuna ahaa ninkii soo ururiyay kuwii is ku magacaabay jabhada
Xukuumada, labada gole, cadaalada waxa maanta u taala in xeer xilka gudoomiyenimo lagaga qaadi karo la soo saaro qofkasta oo si xun u isticmaala awooda xisbi qaran, ama xisbiga laftiisa ruqsadii xisbinimo lagaga noqon karo, si uu wadanku inoogu Badbaado.